စကားလုံးများဖြင့် မျှဝေပြန့်ပွားခြင်း : တန်ဖိုးရှိရာကို Tetra Pak နှင့်အတူ ကာကွယ်ပါ | OnDoctor
By OnDoctor Editor	 On Mar 26, 2019 Last updated Mar 29, 2019
ကျွနု်ပ်တိုကျွန်တော်တို့တွေ အစားအသောက် ဘေးကင်းလုံခြုံဥပါဒ်ကင်းရှင်းမှုကို ဘာကြောင့်အလေးထား သင့်ပါသလဲ?
ဒီခေါင်းစဉ်က ကျွန်တော်တိုနု်ပ်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝနဲ့ဘယ်လိုသက်ဆိုင်ပြီး ကျွန်တော်တိုနု်ပ်တို့ ချစ်ရတဲ့သူတွေကို ဘယ်လို သက်ရောက်မှုတွေ ရှိနိုင်ပါသလဲ? ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း အစားအသောက် ထုတ်လုပ်ရေးခြင်းနဲ့ ထုပ်ပိုးခြင်းရေးဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Tetra Pak ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်က Myanmar Culture Valley မှာ “တန်ဖိုးရှိရာကာကွယ်ပါ” ပွဲကို ကြီးမှုးကျင်းပမယ်ဆိုတာကို online ကနေတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အရမ်းဝမ်းသာသွားပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဘေးဥပါဒ်ကင်းရှင်းရေးအကြာင်းကို ပိုမိုလေ့လာနိုင်ဖို့ကူညီပေးမယ့် အခွင့်အရေးတစ်ခုပါဘဲ။
သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ဘေးဥပါဒ်ကင်းရှင်းတဲ့ အစားအသောက်နဲ့ ကာကွယ်ခြင်း
Tetra Pak ရဲ့ ပြပွဲနဲ့ ဂိမ်းပြခန်းတလျှောက်ကို လျှောက်သွားကြည့်တဲ့အခါ Tetra Pak က ဘေးဥပါဒ်ကင်းရှင်းမှု၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှု နဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကူညီပေးပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးက လူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ သိခဲ့ရပါတယ်။
သူတို့ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ရဲ့ ကတိစကားဖြစ်တဲ့ “တန်ဖိုးရှိရာကာကွယ်ပါ” ရဲ့အဓိပ္ပါယ်က Tetra Pak ဟာ အစား အစားသောက်တွေ၊ လူတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်တ်တွေကို ဘေးဥပါဒ်ကင်းရှင်းအောင်ကာကွယ်ပေးခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Tetra Pak ရဲ့ UHT စက္ကူဘူးတွေမှာ အလွှာခြောက်လွှာပါဝင်ပြီး ၇၅% က စက္ကူဖြစ်ပြီး ၂၅% ကတော့ polyethylene နဲ့ အလူမီနီယံသတ္တုအလွှာနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ UHT နည်းပညာနဲ့ အလွှာခြောက်လွှာ ထုတ်ပိုးမှုတို့ရဲ့ ပူးပေါင်းမှုဟာ အတွင်းရှိ အဖျော်ယမကာအစားအသောက်များကို အပူရှိန်၊ အစိုဓာတ်နဲ့ အလင်းရောင်တို့မှ ကာကွယ်ပေးပြီး အလင်းရောင်အထိမခံနိုင်တဲ့ ဗီတာမင် A, B2, B6, B12, C နဲ့ K အပါအဝင် အဟာရဓာတ်အားလုံးကို ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ သူတို့ကို မိုးရွာရွာနေပူပူ၊ နေရာတိုင်းနီးပါးမှာ ကြာရှည်၊ လွယ်ကူစွာသိမ်းနိုင်ပါတယ်။
အစားအသောက် ဘေးဥပါဒ်ကင်းရှင်းရေးကို အလေးထားရင်း နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ချစ်သုဝေ၊ သက်မွန်မြင့်၊ မယ်လိုဒီ၊ ပိုင်ဖြိုးသု၊ ပိုင်ဇေရဲထွန်းနဲ့ ဇနီး ဇင်သဲနိုင် အပါအဝင် သားငယ်တို့က စက္ကူဘူးထဲမှာရှိတဲ့ Ultra High Temperature(UHT) နို့နဲ့ နို့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ် သူတို့ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေကို ပြသဖို့အတွက် ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်၊ ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အပြင် မိခင်တစ်ဦးလဲဖြစ်တဲ့ ချစ်သုဝေဟာ ကလေးတွေအတွက် အစားအသောက်ဘေးဥပါဒ်ကင်းရှင်းမှုရဲ့ အရေးပါမှုကို သိရှိနားလည်ထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
စကားဝိုင်းပြုလုပ်ရာမှာ တာရှည်ခံပစ္စည်းတွေမပါဝင်ဘဲ နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကို လပေါင်းများစွာအထားခံတဲ့ နည်းပညာဖြစ်တဲ့ UHT နည်းပညာကို ဦးဆောင်တီထွင်ခဲ့တဲ့ Tetra Pak အပေါ် သူမရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ အဟာရအထူးကု ဆရာဝန် ဒေါက်တာဝင်းဝင်းမြင့်နဲ့ Tetra Pak ရဲ့ Key Account Director Mr.CC Tang တို့ကလဲ အစားအသောက် ဘေးဥပါဒ်ကင်းရှင်းရေးရဲ့ ဗဟုသုတတွေနဲ့ Tetra Pak ဘူးခွံထဲမှာ ထုတ်ပိုးထားတဲ့ UHT နို့နဲ့ နို့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ရွေးခြယ်မှုဖြစ်ပြီး နေရာအနှံ့အပြားမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ အနုပညာရှင်တွေဆီက အသုံးဝင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကြားသိရပြီးတဲ့နောက်မှာ မှန်ကန်တဲ့ရွေးခြယ်မှုကိုပြုလှုပ်လုပ်တတ်ဖို့ အကူအညီတွေရခဲ့ပါတယ်။!
UHT နို့နဲ့နို့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ – သင်နဲ့ သင်ချစ်ရတဲ့သူတွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေပါ
ပွဲခင်းထဲကို လျှောက်သွားကြည့်တဲ့အခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထိပ်တန်း ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Vito, MILO, Dutch Mill, Chokchai Farm, Ovaltine, Lactasoy, Abevia, PEP, Marigold နဲ့ Cowhead တို့ကလဲ ကျွန်တော်နဲ့ အခြားပွဲလာသူတွေကို ပျော်စရာကောင်းပြီး ဗဟုသုတရမယ့် အစီအစဉ်တွေနဲ့အတူ ချိတ်ဆက်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
UHT နို့နဲ့ နို့ထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ နမူနာအမြည်းတွေကို တစ်နေကုန်တိုက်ကျွေးပြီး UHT နည်းပညာရဲ့ ကျိုချက်မှုထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ထုတ်ပိုးမှုဟာ စားသောက်ကုန်တွေရဲ့အရည်အသွေးကို ကာကွယ်ယုံသာမက အရောင်၊ အနံ့နဲ့ အရသာကိုပါထိန်းသိမ်းပေးတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ အစားအသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံဥပါဒ်ကင်းရှင်းမှုအတွက် UHT နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ UHT စက္ကူဘူးတွေရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ကျွန်တော်ကတစ်ဆင့် အားလုံးကို အခု ပြန်ပြောပြနိုင်ပြီး ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့သူတွေအတွက် ကျန်းမာပြီး ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်ပြုလုပ်ပေးသွားမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တန်ဖိုးရှိရာတွေကို အားလုံးအတူတူ ကာကွယ်ကြရအောင်။!